नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा थापा, सङ्गठनमा यस्तो छ योगदान ! – Saurahaonline.com
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा थापा, सङ्गठनमा यस्तो छ योगदान !
सौराहा अनलाइन | २०७७, २३ असार मंगलवार
नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौँ : मुलुकको २८औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) मा शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा गरिएको छ । बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआइजी० थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी निरीक्षक हुँदा प्रतिष्ठानसँगै सल्यान र सिन्धुपाल्चोकमा खटिनुभएको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदा धादिङ जिल्लाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक भएपछि उहाँले झापा र कास्की प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० हुँदा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तासमेत हुनुभयो । उहाँ एआइजी भएपछि भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागको प्रमुख हुनुभयो ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीबाट एकैचोटि बढुवा भएर महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो । उहाँको नियुक्तिमा भने सरकारले प्रशंसा पाएको थियो । प्रहरी सङ्गठनमा हालका थापाको नियुक्तिलाई पनि स्वच्छ निर्णयका रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन २०७७, ६ आश्विन मंगलवार
बागलुङ । गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार थालेको धौलागिरि अस्पतालका सबै बिरामी निको भएपछि.....